Maxaan ka naqaan Safiirka cusub ee Mareykanka? | KEYDMEDIA ENGLISH
Ambassador André Jr, waa dublamaasi khibrad u leh qaaradda Afrika, wuxuuna hore u maanulay safaaradaha Mareykanka ee dalalka Djibouti iyo Mauritania, 21-kii Diseembar 2021, ayaana loo dhaariyay inuu noqdo danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Safaaradda Maraykanka ee Muqdisho ayaa shaaca ka qaadday in safiirka cusub ee dalkaas Ambassador Larry E. André, Jr, uu maanta soo caga-dhigtay Caasimadda dalka ee Muqdisho, isla-markaana uu dhawaan warqadihiisa aqoonsiga u gudbin doono Villa Soomaaliya.
Danjire André, wuxuu lahaa mas'uuliyad sare oo arrimaha Soomaaliya ah, markii uu ahaa la-taliyaha dhanka siyaasadda ee safaaradda Mareykanka ee Nairobi sannadihii 2006 ilaa 2008, wuxuuna dhowr jeer Mareykanka u metelay shirar caalami ah oo ku saabsan geeddi-socodka nabadda Soomaaliya.
Sannadkii 2007-dii, danjire André waxa uu asaasay Waaxda Arrimaha Soomaaliya [Somali Affairs Unit], taas oo aakhirkii noqotay hawl-galka Maraykanka ee Soomaaliya, [U.S. Mission Somalia], hayeeshee, wuxuu hadda ku soo aaday xilli xasaasi ah oo lagu guda jiro doorashada heer federaal ee dalka.
Ambassador André Jr, ayaa xamnaarsan go’aanka Wasaaradda Arimaha Dibadda Mareykanka, ee ku aaddan in la soo gebagebeeyo doorashada Golaha Shacabka ugu dannbeyn 25-ka Febraayo, taas oo ay hore ugu heshiiyeen hoggaamiyaasha Somaaliya.
Danjire Larry E. André, Jr, wuxuu hore u soo noqday Danjiraha, Safaaradda Maraykanka ee Djibouti; Safiirka, Safaaradda Mareykanka ee Nouakchott; Sii-hayaha Safaaradda Maraykanka ee Koonfurta Suudaan; Ku-xigeenka Safiirka, Safaaradda Maraykanka ee Dar es Salaam; La-taliyaha Siyaasadda, Safaaradda Maraykanka ee Nairobi; Ku-xigeenka Safiirka, Safaaradda Maraykanka ee Freetown.
Waxa uu sidoo kale ka soo shaqeeyay dalalka Ciraaq, Bangladesh, Cameroon, Chad, Senegal iyo Nigeria, halka uu soo noqday Agaasimaha Xafiiska Ergeyga Gaarka ah ee Suudaan iyo Koonfurta Suudaan; Ku-Xigeenka Agaasimaha Xafiiska Fulinta ee Arrimaha Afrika, iyo Agaasime ku-xigeenka, Xafiiska Arrimaha Galbeedka Afrika.
Wuxuu shahaadada MBA ka qaatay Jaamacadda Gobolka Arizona/Thunderbird School of Global Management (1988) halka cilmiga Siyaasadda ka diyaariyay Claremont McKenna College (1983). Wuxuu ku hadlaa Faransiis. Isaga, xaaskiisa Ouroukou, iyo wiilkooda Isidore waxay deggan yihiin Caldwell County, Texas.
Danjire Larry E. André, Jr, xilli uu 2001-dii, ka shaqeeyay safaaradda Maraykanka ee Addis Ababa, Ethiopia, wuxuu booqasho aan u jeedkeedu caddeyn ku tagay Puntland [Garowe], wuxuuna halkaas kula kulmay shaqsiyaad uu ku jiray Cabullahi Yuusuf Axmed.
Ambassador André Jr, wuxuu beddelaya Donald Yamamoto, oo ahaa Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya tan iyo 2018, imaatinka safiirkan cusub ayaana ku soo beegmeysa iyadoo Soomaaliya ay ka jirto qalalaase siyaasadeed iyo mid doorasho.
Dowladda Mareykanka ay hore ugu hanjabtay inay cunaqabateyn ku soo rogi doonto madaxda loo arko inay caqabad ku yihiin dhameystirka geeddi socodka doorashooyinka dalka.
Mareykanka ayaa Stephen M. Schwartz u soo diray Soomaaliya bishii Ogosto 2016 si uu u noqdo safiirkii ugu horreeyay ee dalkaas tan iyo 1991-kii, sanad kaddib markii xilka laga tuuray kaligiis taliyihii hoggaaminayay Kacaanka.
Soomaaliya ayaa Mareykanka u aragta saaxiib dhab ah oo la dagaalama Al-Shabaab isla-markaana qeyb lixaad leh ka qaata dib u dhiska ciidanka. Washington waxay tababartaa guutada Danab, oo ah ciidan sare oo ka tirsan Xoogga dalka.